थालीयो यौटा ब्लग, यौटा लेखन यात्रा | Umesh's Blog
दाईले भनेका कुरा पनि ठिकै हो । किन नलेख्ने ब्लग । किन मैलेचैँ जाने, बुझेका, सुनेका भए पनि २,४ अक्षर ब्लगमा नकोर्ने भन्ने लाग्यो ।
ब्लगीङ्ग सुरु गर्न अस्ति देखि मन लागीरहेको थियो, बल्ल मौका जुराएँ, मैले आफैँ । त्यसमा उत्प्रेरणाको स्रोत हुनुभयो शैलेश ज्ञवाली दाई ।
मनमा कुरा खेल्न थाल्यो जाबो ब्लग लेखेर के नै पो हुन्छ होला र ? कुनै नयाँ काम गर्न पाएपो मजा हुन्थ्यो त । फेरी सोचेँ निर्मल दाईको ब्लग, शैलेश दाईको ब्लग, अनी नरेन्द्र रौले दाईको ब्लग अनी अरु अरुहरुको ब्लग । कति राम्रा छन्, ति ब्लगहरु । कति नयाँ कुरा पनि सिक्न पाईन्छ ति ब्लगहरु पढेर । अनि भित्रैबाट लाग्यो, जे परे पर्ला म पनि लेख्न थाल्छु । जसले जे सुकै भनोस् । राम्रो भनोस् कि नराम्रो भनोस् म पनि लेख्न थाल्छु । जन्मदैँ जानेर आउने त को पो हुन्छ होला । विस्तारै विस्तारै सबै कुरा आफैँले सिक्दै जाने त हो नी । मैले थाल्दै थालीन भने गल्ति पनि हुँदैन तर सृजना पनि त हुँदैन नी ।
अनि यौटा टेम्प्लेट खोजेँ, ईन्स्टल पनि गरेँ । राम्रो छैन, तर पनि अक्षर पढ्न त मिल्छ । यसो फुर्सदमा २,४ अक्षर कोरेर पोस्ट गर्न पनि मिल्छ । बस् अहिलेलाई यति भए पुगीहाल्यो नी, फुर्सद भएका बेला डिजाईनिङ्ग राम्रो पारुँला, नयाँ नयाँ फन्सनहरु थपौँला । कति फेसबुकका भित्ताहरुमा मात्र अक्षरहरुलाई छर्नु । कसैलाई मन पर्दैन होला न्यूज फिडमा देखेर, कसैलाई वाक्क लाग्छहोला मेरा अक्षरहरु पढेर । बरु ब्लग लेख्छु, जसलाई मन पर्छ खोलेर पढ्छ, जसलाई मनपर्दैन पढ्दैन । अनि सोचेँ नेपाली बाट लेखोँ कि अंग्रेजीबाट । नेपालीबाट मात्र लेखौँ कि जस्तो लाग्यो, फेरी दिमागले भन्यो ‘ह्या, के नेपालीबाट लेख्नु । लेखेपछि अंग्रेजीबाट लेख्ने हो नी ।’ आफैँलाई द्विवीदा पलायो । मनका कुरा लेख्नलाई त नेपाली भाषा नै सरल हुन्छ । सलल बग्छ । आफ्नै मातृभाषापो हो त नेपाली, अंग्रेजीमा कहाँ यसरी नेपालीमा शब्द बगाए जस्तो बगाउन सकिन्छ ? अनि यसो आफुले जानेका कुराहरु पि.एच.पी, जाभास्कृप्ट, डाटाबेस जस्ता कुराहरुमा पनि केही लेख्न मनलाग्यो भने फेरी नेपाली बाट लेख्न अप्ठ्यारो पर्ला की जस्तो लाग्यो । निकै बेर घोरीएँ । आ, के फरक पर्छ र दुवै भाषमा लेखौँला । कुनै कुरा नेपालीमा कुनै कुरा अंग्रेजीमा । अनी भाषा जुराएँ नेपाङ्ग्रेजी ।
टेम्प्लेट पनि भयो । भाषा पनि भयो । दुवै कुरा सकियो । अब रह्यो कन्टेन्ट । के कन्टेन्ट हाल्ने होला ? एकै चोटी कसरी धेरै कन्टेन्ट लेख्नेहोला । समय पनि पाईदैन । दिउँसो दिनभर अफीसमा फुर्सद हुँदैन, बेलुका रुममा लखतरान भएर आईपुग्यो । अनि कुकमेन बन्यो आफैँ । खाना खायो । २,४ वटा नयाँ प्रविधी सम्बन्धि कुराहरु हे¥यो ईन्टरनेटमा, एक, दुई पेज पिएच पी कोड लेख्यो, २–४ वटा डाटाबेसका नयाँ टुल्स चलायो, अझै झ्वाँक चल्यो भने फोटोसपमा माउस कुदायो । अनि कति बेला लेख्नेहोला कन्टेन्ट । फेरी सम्झेँ, ओ हो म्यानेज्मेन्ट पढेको विद्यार्थी पो त । जाबो यति कुरालाई पनि म्यानेज गर्न सकिन भने त पढेको कुरा सबै पानीमा गैगयो नी । लाग्यो पढेको कुरालाई फील्डमा उतार्ने बेला यहि हो । उतार् उमेश उतार् । भित्रको अन्तरमनले बोल्यो ।
साथीहरु बेला बेलामा भन्ने गर्छन् यार म्यानेजमेन्टको स्कोप छैन । मैले स्कोप देखेँ । जीन्दगीलाई म्यानेज गर्नु पनि त यौटा म्यानेजमेन्ट नै हो नी । अनि झन् आफु बिगत ३,४ बर्ष देखी आईटी को पनि विद्यार्थीे मान्छे, यति ब्लग पनि लेखिएन भने त भएन । अफीसमा पनि आफुले जानेका २,४ वटा पि.एच.पीका कोडहरु, दुईचारवटा डाटाबेसका क्वेरीहरु, थोरबहुत जाभास्कृप्टका लाईनहरु अरुलाई सिकाउँदै छु । अब थप्छु यौटा ब्लग, लेख्छु जानेका कुराहरु । मैले जानेका २,४ कुराहरुले अरुलाइ पनि केही मद्दत हुन सक्छ । अनि अरुले जानेका कुराहरु पनि त मैले लिन पाउँछु नी फीडब्याकको रुपमा । अहो! यो पनि यौटा पाठशाला पो हुनेरैछ । भित्र भित्रै रमाईलो लाग्यो । केही कुरा सिक्न पाईने भयो । भनिन्छ प्रकृति यौटा पाठशाला हो । कसले भनेको हो कुन्नी यो भनाई साँच्चै नै बडो गजब लाग्यो । सहि भनेको रैछ भन्ने अनुभव भयो ।
अनि थालीयो यौटा ब्लग, यौटा लेखन यात्रा । आफुले जानेका कुरा, मनमा भएका कुरा, समग्रमा यौटा अक्षर घर ।
न म कुनै लेखक हो, न मलाई कन्टेन्ट लेख्न नै आउँछ । हुनसक्छ मैले लेखेका शब्दहरुमा व्यापक त्रुटिपनि, मैले लेखेका अक्षरहरुले मैले भन्न खोजेको भाव व्यक्त नगर्न पनि सक्छ । मलाई आशा छ, तपाईँ, जसले यी अक्षरहरु पढ्नुहुन्छ, ले गल्ती ठाउँ भेटाउने बित्तिकै मलाई सुझाव दिनुहुनेछ । मैले नजानेको ठाउँमा सिकाउनु हुनेछ र यौटा विद्यार्थी सम्झेर मलाई लेख्नको लागी प्रेरणा दिनुहुनेछ । ह्याप्पी ब्लगीङ्ग् । ः)